Rakotondrazafy Lalatiana : tsy te ho ratsy endrika ny HCC (NewsMada) | AEMW
Rakotondrazafy Lalatiana : tsy te ho ratsy endrika ny HCC (NewsMada)
« Tsy te ho ratsy endrika eo anatrehan’ny fanjakana ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC): natao izay sitrapon’ny fanjakana. Tsy nihemoran’ny HCC ny lalàn’ny fifandraisana, fa nambarany hoe mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana. »
Io ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety eo anivon’ny Hetsika fahalalahana maneho hevitra, Rakotondrazafy Lalatiana, teny Antanimena, ny faran’ny herinandro teo, tamin’ny nanapahan’ny HCC, ny 12 aogositra, fa araka ny lalàmpanorenana ny lalàn’ny fifandraisana.
Notarihin’ny HCC eo amin’ny seha-pahalalana avo loatra ny adihevitra sy ny fijeriny mba ho very an-javony ny olon-tsotra tsy hahatakatra loatra izay pitsopitsony araka ny lalàna, raha ny fanazavany.
Rehefa tena dinihina izay ambaran’ny HCC: misy ny andininy mila hazavaina, tokony hasiana famaritana misimisy kokoa… Misy dimy na enina nasiany fanamarihana, ankoatra ireo tsy maintsy hojerena mba hifanaraka amin’ny lalàmpanorenana io lalàna io.
« Raha tsorina, te hiteny ny HCC hoe tokony haverina dinihina, hasiana famaritana, sns ao anatin’ny lalàna mifehy ny fifandraisana. Na izany aza, ho an’ny besinimaro: mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana io lalàna io, araka ny fanapahan’ny HCC », hoy izy. Misy karazana hafetsena ihany eo amin’ny HCC amin’izany.
Miala tsy ho tomponandraikitra ny filoham-pirenena
« Raha iny lalàna manokana iny, tsy ny filoham-pirenena no niaingany. Avy amin’ny mpanao gazety, avy amin’ny rehetra maro anisa… Samy mandray ny andraikiny ny rehetra: ny governemanta, ny mpanao gazety, ny HCC », hoy ny filoha Rajaonarimampianina, teny Ivato, ny faran’ny herinandro teo.
Ao anatina tany tan-dalàna isika rehetra, miara-miasa hanamafy an’izay. Maro ny mpanao gazety resy lahatra hoe ilaina io lalàna io, araka ny nambarany. Ilaina io amin’ny asa fanaovan-gazety, indrindra amin’ny filaminana sy fampandrosoana ny firenena.
Tsy hampilamina ny famonoana fahafahana
Hampilamina sy hampandroso ny firenena ve ny tsy fisian’ny fangaraharana amin’izay rehetra ataon’ny mpitondra? Na tsy azo avoaka ho fanta-bahoaka izay tsy mety ataony… Mivoaka aza izany, tsy hita izay fiovana amin’ny an-kifonofono lava, ary tsy misy izay fanovana fomba fiasa…
← Pasitera Mailhol : tsy ilaina ny valifaty politika… (NewsMada)
An-kitsim-po : fitakiana nampahantra vahoaka (NewsMada) →